Imwe yeiyo Virtual Dj: Mixxx 2.0 inowanikwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mixxx 2.0: Virtual DJ yeLinux
Vamwe vanobva kuWindows world vanozoziva mamwe ma software ezvinangwa izvi, zvekugadzira musanganiswa sekunge ari DJ. Muenzaniso ndeye yakakurumbira Virtual Dj, pakati pevamwe, asi muGNU / Linux kune dzimwe nzira dzerudzi urwu rwechirongwa, semuenzaniso iri Mixxx. Iye zvino tinogona kutarisira iyo nyowani yeMixxx 2.0 vhezheni kugadzira mimhanzi yedu mimhanzi, kusanganisa matraki, kuwedzera mhedzisiro, kutamba neyakaenzana, nezvimwe. zvese kubva kune yakazara uye inonakidza interface iyo inogona "kupfekedzwa" kune kwedu kufarira nekuda kwematehwe aripo.
Anopfuura makore maviri ebudiriro kuzivisa Mixxx 2.0, iyo nyowani vhezheni inoisa iyo icing pakeke mushure memakore gumi ebasa rakaoma rekuvandudza kubva chirongwa chakatanga. Zvakawanda zvakavandudza uye zvachinja Mixxx kubvira payakatangwa. Nechibuditswa chitsva ichi, chigadzirwa chakaiswa patafura icho chingamiririra shanduko, kumberi uye shure munhoroondo ye software iyi.
Zvino zvinoshanda kuyedza release shanduro nekukurumidza uye isingaregi nguva yakawanda ichipfuura pakati pekutanga kumwe nekumwe. Asi chinhu chakanakisa ndechekuti isu tatova neiyi vhezheni ine zvakawanda zvinogadziridzwa, zvitsva maficha uye kugadzirisa YeMixxx 2.1, ivo vanogadzira vakagadzira nzira yekusimudzira iyo inoenda nekunyora zvekare ese odhiyo faira maodhi uye nekuvandudza mutyairi rutsigiro.
MuMixxx 2.0 iwe unogona kuona kumwe kunatsiridza kuvandudzwa, senge rutsigiro rwemusoro unochinja, mhedzisiro mitsva, uye kuwanda kwezvinhu zvitsva zvimwe zvaunogona kunyatsonzwisisa pawebhusaiti yepamutemo yeprojekiti www.mixxx.org. Uye kana iwe ukashandisa yakakosha distro yevaimbi vanozivikanwa saArdor, zvirokwazvo iwe watove nehukama neichi chirongwa. Zvikasadaro isu tinokukurudzira kuti iwe ugadzire yako wega masanganiswa enziyo dzako dzaunofarira neiyi yakanakisa kusanganisa software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Mixxx 2.0: Virtual DJ yeLinux
Hukuru kushanda, kunyanya kune dvs system
Mune ino dzidzo ini ndinotsanangura maitiro ekugadzira traktor scracth pro yemahara!
Pindura kune deejays
Muunganidzwa weakanakisa maapplication e2015 yeLinux
Nylas N1, imwe nzira mutengi kune Thunderbird